Danjire Daahir Geelle iyo howlwadeenada safaarada oo ka qeybgalay Kulan sanadeedki ardayda Soomaaliyeed ee Dalka Sacuudiga | Baydhabo Online
Danjire Daahir Geelle iyo howlwadeenada safaarada oo ka qeybgalay Kulan sanadeedki ardayda Soomaaliyeed ee Dalka Sacuudiga
Kulan sanadeedki ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga oo sanadkan si heer sara ah loo soo agaasimay ayaa waxa uu ka dhacay caasimadda dalka sacuudiga.
Xafaddan oo saanadkan ahayd mid aad u balaaran, ayaa waxaa si dhameystiran ardada ugala soo qeybgalay kulana damaashaaday sairka soomaaliya u fadhiya dalka Sacuudi Carabiya Danjire Daahir Maxamuud Geelle oo ay wehliyeen ku xigeenkiisa Mudane Saalim Macoow Xaaji iyo inta badan diblumaasiyiinta soomaaliyeed ee ka tirsan safaaradda.
Kulanka oo ay lafdhabar u ahaayeen ardada labada jaamacadood ee Imaam iyo Malik sacuud ayaa waxa ayardadu ku muujiyeen sida ay ugu riyaaqsanyihiin shaqada qaran ee uu Danjire Daahir Maxamuud Geelle iyo diblumaasiyiinta kalaba ay u hayaan qaranka soomaaliyeed, iyo sida hufan oo ay u garab taagan yihiin ardada, una fududeeyaan arimahooda safaaraddaku xirma, iyaga oo ka dalbaday in safaaraddu sii laba laabto ka warqabka iyo ka dadaalidda ardayda.
Dhanka kale Danjire Daahir Maxamuud Geelle oo xafladda ka hadlay ayaa ugu hambaliyeeyay ardada dadaalka waxbarasho iyo hanka qaran oo ay xambaarsan yihiiin, isaga oo faray ardayda in ay waajibkooda waxbarasho ay xoogga saaraan isuna diyaariyaan hogaanka dalka mustaqbalka dhaw.
Waxa kale oo uu sairku u muujiyay ardayda sida uu ugu farxsanyahay wadajirkooda iyo isku xirnaashahooda, isaga oo u balan qaaday in safaaradduay garab taagnaan doonto goor walba, wax badan oo baahiyahooda ahna ka jawaabi doonto.
Dhanka kale, Sheekh Maxammed Saruur Xaaji Axmed oo ka mid ahaa martisharafki kulanka ka soo qeyb galay ayaa waxa uu qaadaadhigay waayihiisi ardaynimo ee uu dalka sacuudiga ku qaatay, iyo sida ayaradaydi jaamacadaha sacuudiga ka aaxay ay kaalin mug leh uga qaateen badbaadinti umadda soomaaliyeed xiligi adkaa ee la soo maray.
Guud ahaan, xaadda oo ahayd mid aan loo kala harin ayaa waxa ay ku soo gabagabowday jawi qurux badan oo ay u wada riyaaqeen dhamaan dadki ka soo qeyb galay.